विवाह प्रस्ताव गर्दा प्रेमीको डुबेर ज्यान गुम्यो ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
विवाह प्रस्ताव गर्दा प्रेमीको डुबेर ज्यान गुम्यो !
आफ्नी प्रेमिकालाई पानीभित्रबाट विवाह प्रस्ताव गर्ने क्रममा एक अमेरिकी नागरिकको डुबेर मृत्यु भएको छ । स्टेभेन बिबर र उनकी प्रेमिका केनिसा आन्टोनिया तान्जेनियाको एउटा पानीमुनिको रिसोर्टको एउटा कोठामा बसेका थिए । मान्टा रिसोर्टको पानीभित्र पौडी खेली प्रेमिका आन्टोनियालाई विवाह प्रस्ताव गर्दागर्दै बिबर डुबेका थिए ।
बिबरको मृत्यु भएको आन्टोनियाले पुष्टि गर्दै भनेकी छिन्, ‘बिबर गहिराइबाट सतहमा आएनन् ।’ पानीभित्रको कोठाबाहिर निस्फिक्री ढंगले एक्लै पौडने क्रममा बिबर डुबेको मान्टा रिसोर्टले जनाएको छ ।
‘मान्टा रिसोर्टमा यही बिहीबार भएको घटनाप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्छौँ,’ रिसोर्टले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । घटनाले सबैजना स्तब्ध बनेको रिसोर्टका सिइओ म्याथवी साउसले बताए । बिबर र उनकी प्रेमिकाले रिर्सोटको पानीमुनिको कोठा चार दिनका लागि बुक गरेका थिए । प्रतिदिनको १७ सय डलर पर्ने सो कोठा पानीको सतहभन्दा ३२ फिटमुनि रहेको छ ।
रिसोर्टको तेस्रो दिनको बसाइमा बिबरले विवाह प्रस्ताव गर्ने उद्देश्यले पानीभित्र हाम फालेका थिए भने उनकी प्रेमिकाले सिसाको कोठाबाट सो दृश्यको भिडियो खिचिरहेकी थिइन् । उनले एउटा नोट लेखेर क्याबिनको सिसाको झ्यालतर्फ फाल्न लागेका थिए । उनको नोटमा लेखिएको थियो, ‘तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु भन्नका लागि लामो समय श्वास रोक्न सक्दिनँ ।’ उनी गोजीबाट इन्गेजमेन्ट रिङ झिकेर प्रेमिकालाई देखाउने क्रममा डुबेका थिए ।